Yakabudirira Nhare Yekushambadzira Maitiro uye Kugonesa | Martech Zone
Yakabudirira Nhare Yekushambadzira Maitiro uye Optimization
NeChishanu, Gunyana 12, 2014 Muvhuro, October 12, 2015 Douglas Karr
Ivhareji mbozhanhare kushambadza kusvika kune vanoshandisa chiuru iPhone ndeye $ 1,000… kwete yakaipa CPM apo mamwe masvikiro anodhura kuwanda kweizvozvo. Pasina kutaura kuti vashandisi vefoni vanowanzo tenga uye vakagadzirira kutenga. Asi iyo mobile advertising mamiriro akapamhama uye akavhiringidza. Kune akawanda mafoni epuratifomu mapuratifomu uye mazana enzira dzekuwana nharembozha mushandisi - kubva kushambadziro, kune zvemagariro kushambadza, kuemail uye zvimwe. Kuisa pamwechete yakazara nhare mbozha yekushambadzira zvinoda zvakati wandei zvebasa asi zvinogona kukohwa zvinoshamisa mhedzisiro.
Kutenda kune iri kukura misika yemafoni uye yayo inowana nhaka yekudaira dhizaini dhizaini, kugadzirisa yako kushambadzira kune ako anotarisirwa vateereri kuri nyore kupfuura nakare kose, nekuti vashandisi vane ruzivo rwakafanana nezvako zvemukati kunyangwe ivo vari pafoni yavo, piritsi, kana PC. Maitiro akadai sekuswera masikati ngaakuenderere mberi nekunatsa kushambadza kwako kwenhare kuti usvike kune vanhu chaivo, panguva yakakodzera, panzvimbo chaipo. Kunzwisisa kukosha kwekushambadzira kwenhare, pamwe nemaitiro ayo anoshanda, zvinogona kukupa iwe nzira ine simba uye inodhura yekusvika nekubata vateereri vako zvisati zvamboitika.
Imwe kiyi kune izvi infographic kubva Whoishostingthis.com izvo zvinozorodza ndezvekuti ivo vanonanga munzira iyo mushandisi anoshandisa inotora - kubva kushambadziro kuenda kuchinjiso - kuona kuti nzira yese yekushandurwa yakagadziridzwa kune chiitiko chefoni. Yakakura infographic!
Tags: bofu mbozha kushambadzira netiwekibuzzcityzuva rekusiyanadaypartingdmggeotargingmaokokuvhimainmobiiphon adsleadboltyemuno nhare mbozha nharenharembozhanharembozha yekushambadziranhare dzekushambadzira nharenhare mbozha yekushambadziranharembozhamobile advertisingnhare mbozhanhare yekugadzwamobile banner adsmobile makwikwinhare cpamobile daypartingnharembozha emailnharembozha email tsambamafoni mafomunharembozhamobile marketingnharembozhamobile optimizationkunyoresa nharenhare inopindura webhu dhizaininhare mbozha yakazadza adsmobile search adsnharembozhamobile viewportmobile weathermobiletheorymobpartneryemuno nharembozha webhu dhizainipremium bofu nhare mbozha nhareinopindura nzvimbosolomosponsormobtwinpinewhoostostingthisxadyero mapejiyocYP
Iyo Yekushambadzira uye Yekutengesa Bhenefiti yeKushambadzira Mashini
Tsananguro Dzichakubatsira Kuwana Iwe Mamwe Instagram Anofarira uye Anotevera